Alohotsy - Wikipedia
Ny Alohotsy dia vintana faharoa ambin' ny folo amin' ny fanandroana malagasy. Ny Adalo no eo alohany ary ny Alahamady no manaraka azy. Ny tapany antsinana amin' ny rindrin-trano avaratra no toerana omena azy. Vintan' olona tsy mahatombin-toerana ny Alohotsy araka ny finoan-drazana malagasy. Tsy alana volo na hoho na ampiasana zava-maranitra ny zaza madinika fa tsy ho mety sitrana raha maratra.
1.2 Ny antokon-kintana Hazandrano sy ny zôdiaka
2 Ny vintana Alohotsy
2.2.2 Vava Alohotsy
2.2.3 Vody Alohotsy
2.2.4 Ala faditra
2.3 Volana Alohotsy
Avy amin' ny anaran' antokon-kintan' ny zodiaka amin' ny teny arabo hoe الحوت / Al-Hut ("trondro") ny hoe Alohotsy. Manondro ny antokon-kintana atao amin' ny teny latina sy anglisy hoe Pisces na amin' ny teny frantsay hoe Poissons. Amin' ny fiteny soahily dia atao hoe Hutu na Samaki io antokon-kintana io. Amin' ny teny maley dia atao hoe Hut na Ikan ihany koa izy.
Ny antokon-kintana Hazandrano sy ny zôdiakaHanova
Ny fotoana andalovan' ny masoandro ao amin' ny antokon-kintana Hazandrano dia amin' ny 12 Marsa hatramin' ny 18 Avrily. Eo amin' ny 15 Marsa hatramin' ny 14 Avrily ny fari-potoan' ny Hazandrano ao amin' ny zôdiakan-kintana fa amin' ny 20 Febroary hatramin' ny 20 Marsa kosa izany ao amin' ny zôdiaka mikisaka. Tsy mifanaraka amin' ireo ny fanandroana malagasy noho izy miandry tsinam-bolana.
Ny vintana AlohotsyHanova
Ao amin' ny fanandroana malagasy dia vintana faharoa ambin' ny folo koa ny Alohotsy ka ny tapany antsinana amin' ny rindrin-trano avaratra no toerana omena azy. Zanabintana ny Alohotsy. Mifandratra amin' ny Asombola sy miarina eo amin' ny Adimizana ny vintana Alohotsy. Baben' ny renivintana Alahamady ny zanabintana Alohotsy. Ao amin' ny fitetezana andro dia mitondra tonon' andro roa ny Alohotsy, dia ny vava Alohotsy (na vavan' Alohotsy) sy ny vody Alohotsy (na vodin' Alohotsy).
Vintan' olona tsy mahatombin-toerana ny Alohotsy araka ny finoan-drazana malagasy. Tsy alana volo na hoho na ampiasana zava-maranitra ny zaza madinika fa tsy ho mety sitrana raha maratra.
Atao hoe volam-padina ny volana Alohotsy noho izy iomanana amin' ny Asaramanitra (izany hoe ny Alahamadibe). Tandremana mafy mba tsy haràtra amin' ny hety na antsy ny zazamadinika fa tsy ho mety sitrana ka noho izay tsy alana volo na hoho na ampiasana zava-maranitra. Ny olona maty ao amin' ny volana Alohotsy dia alevina mangingina. Andro maivana ny andro Alohotsy.
Ny zaza teraka vava Alohotsy dia tsy ho marim-ponenana fa mifindrafindra na toerana na zavatra hafa. Amin' ny vava Alohotsy dia tsy misy manao taozavatra.
Ny zaza teraka vody Alohotsy dia ho salama ihany. Amin' ny vody Alohotsy dia tsy misy manao taozavatra.
Raha hanorin-trano sy hampaka-bady amin' ny andro Alohotsy dia tsy maintsy misorona vatokaranana sy hazo harahara na famaho alevina eo atsinanan'ny andry avaratra tandrify ny Alohotsy mba tsy hihetsiketsika.
Misy amin' ny Malagasy ny mandray ny volana Alohotsy ho volana faharoa ambin' ny folo amin' ny taona ao amin' ny tetiandro malagasy (raha ny Alahamady no ataony volana voalohany). Manomboka amin' ny vava Alohotsy miafara amin' ny vody Adalo ny volana Alohotsy raha misy 28 andro. Raha tsy tsinanam-bolana ny andro aorian' ny vody Adalo dia miafara amin' ny vava Alohotsy ny volana izay misy 29 andro; raha mbola tsy tsinana aorian' io vava Alohotsy io dia mifarana amin' ny vody Alohotsy ny volana izay misy 30 andro.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Alohotsy&oldid=1011403"
Dernière modification le 15 Mey 2021, à 11:09
Voaova farany tamin'ny 15 Mey 2021 amin'ny 11:09 ity pejy ity.